လေးဘာသာ ဂုဏ်ထူး နဲ့ တစ်ဘာသာ ကျရှုံး ခဲ့မယ်ဆိုရင်.... - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / လေးဘာသာ ဂုဏ်ထူး နဲ့ တစ်ဘာသာ ကျရှုံး ခဲ့မယ်ဆိုရင်....
Apann Pyay 6:21 PM ဗဟုသုတအစုံ Edit
ပညာရေး စနစ် ပြင်သင့်ပြီလား…?
'' မသီရိမွန်၏ အမှတ်စာရင်းသည် ဤကဲ့သို့ ဖြစ်မည်ဆိုပါက …"
နိင်ငံခြား မှာ ဆိုရင်တော့ ဒီကလေး က ကျတဲ့ဘာသာပဲ ပြန် ဖြေဖုို့ လိုမယ်။
မြန်မာ ပြည်မှာတော့ သူကို ကျတယ်လုပ်လုိုက်တယ်။ ဒီတော့ အချိန် ကုန် တယ်။ ငွေကုန်တယ်။ ကလေး စိတ်ဓါတ်ကို ထိခိုက်သွားတယ်။
ဒိလို ပညာရေးစနစ်ကို အားမပေးသင့်တော့ဘူး။ ဒီနစ် ဆယ်တန်း စာမေးပွဲ မှာ အောင်မြင်သူ
၃၇ ရာခုိုင်နှုန်းရှိတယ်လုို့ဆိုတယ်။ ကျရှုံး သူက ၆၃ ရာခုိုင် နှုန်း ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။
ဒါက တိုင်း ပြည် ကို အကြီး အကျယ်ထိခိုက် စေပါတယ်။ အောင်မြင်သူတွေကို ချီး မြှောက်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီစနစ် ဆိုးကြောင့် ၆၃ ရာခုိုင်နှုန်း သော ကလေးတွေ ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကတော့
တော်တော်လေးကို ထိခိုက်သွားနိင်ကြတယ်။ ဖြေဆိုသူက ၆ သိန်းနီးပါးရှိတယ် လို့ သိရတယ်။
အမေရိကန် မှာတော့ အထက် တန်းအထိကို ကလေးတိုင်း အလွယ်တကူ အောင် မြင် ကြတယ်။ တတ်လဲ တတ်ကြတယ်။ တက္ကသိုလ် တန်း ကို ကိုယ်ကြိုက်ရာဘာသာတွေကိုသင်နိင်တယ်။
မြန်မာ ပြည်မှာ အမှတ် တမှတ် ၂ မှတ် လို သွားလုို့ကိုယ်သင်ခြင်တဲ့ဘာသာရပ်ကို တသက်လုံး
မသင်နိင်တဲ့ဇတ် လမ်းတွေက လဲ အများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီး ပါပြီ။
တက္ကသိုလ်ရောက်မှ သူတို့အစွမ်း ကုန် လုပ်ရတော့တာပဲ။ တကယ်လုို့ ကျရှုံးတဲ့ကလေး ၆၃ ရာခိုင် နှုန်း ကို အမေရိကန် ကို ပို့့ပြီး ဖြေခုိုင်းရင် အကုန် နီးပါး အောင် ကြမယ်လုို့ကျနော်မြင်တယ်။
အမေ၇ိကန် တွေက ကျောင်းသား ၆ သိန်း လုံးကို သိမ်းကျုံး ပြီး စာမေးပွဲစစ်တဲ့စနစ်တွေကို မလုပ်ကြဘူး။ တဦးခြင်း ဆီကုို ဘာ တော်သလဲ ။ ဘာမှ အား ကောင်းသလဲ ။ ဘာ တွေအားနည်းနေသလဲ ဆိုတာကို ဆရာတွေ က လေ့လာတယ်။ မှတ်တမ်းတွေလုပ်ကြလေ့ရှိတယ်။
ဆက်ပြီး ကြိုးစားခြင်လာအောင် အားပေးတော့တာပဲ။ အထက် တန်း မပြီးတဲ့ကလေးတွေရှိပါတယ်။ အနည်း အကျဉ်းလောက်ပဲရှိတယ်။
မြန်မာ လူငယ်တွေ ဟာ သူတို့ ရဲ့ ပညာရေး စနစ် ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ ထက် …
photo- ဤကဲ့သို့ ဖြစ်မည်ဆိုပါက ဥပမာပြပုံ ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပညာရေး စနဈ ပွငျသငျ့ပွီလား…?
'' မသီရိမှနျ၏ အမှတျစာရငျးသညျ ဤကဲ့သို့ ဖွဈမညျဆိုပါက …"
နိငျငံခွား မှာ ဆိုရငျတော့ ဒီကလေး က ကတြဲ့ဘာသာပဲ ပွနျ ဖွဖေုို့ လိုမယျ။
မွနျမာ ပွညျမှာတော့ သူကို ကတြယျလုပျလုိုကျတယျ။ ဒီတော့ အခြိနျ ကုနျ တယျ။ ငှကေုနျတယျ။ ကလေး စိတျဓါတျကို ထိခိုကျသှားတယျ။
ဒိလို ပညာရေးစနဈကို အားမပေးသငျ့တော့ဘူး။ ဒီနဈ ဆယျတနျး စာမေးပှဲ မှာ အောငျမွငျသူ
၃၇ ရာခုိုငျနှုနျးရှိတယျလုို့ဆိုတယျ။ ကရြှုံး သူက ၆၃ ရာခုိုငျ နှုနျး ဖွဈတယျဆိုတဲ့သဘောပေါ့။
ဒါက တိုငျး ပွညျ ကို အကွီး အကယျြထိခိုကျ စပေါတယျ။ အောငျမွငျသူတှကေို ခြီး မွှောကျသငျ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ဒီစနဈ ဆိုးကွောငျ့ ၆၃ ရာခုိုငျနှုနျး သော ကလေးတှေ ရဲ့ စိတျဓါတျကတော့
တျောတျောလေးကို ထိခိုကျသှားနိငျကွတယျ။ ဖွဆေိုသူက ၆ သိနျးနီးပါးရှိတယျ လို့ သိရတယျ။
အမရေိကနျ မှာတော့ အထကျ တနျးအထိကို ကလေးတိုငျး အလှယျတကူ အောငျ မွငျ ကွတယျ။ တတျလဲ တတျကွတယျ။ တက်ကသိုလျ တနျး ကို ကိုယျကွိုကျရာဘာသာတှကေိုသငျနိငျတယျ။
မွနျမာ ပွညျမှာ အမှတျ တမှတျ ၂ မှတျ လို သှားလုို့ကိုယျသငျခွငျတဲ့ဘာသာရပျကို တသကျလုံး
မသငျနိငျတဲ့ဇတျ လမျးတှကေ လဲ အမြားကွီးဖွဈခဲ့ပွီး ပါပွီ။
တက်ကသိုလျရောကျမှ သူတို့အစှမျး ကုနျ လုပျရတော့တာပဲ။ တကယျလုို့ ကရြှုံးတဲ့ကလေး ၆၃ ရာခိုငျ နှုနျး ကို အမရေိကနျ ကို ပို့့ပွီး ဖွခေုိုငျးရငျ အကုနျ နီးပါး အောငျ ကွမယျလုို့ကနြျောမွငျတယျ။
အမရေိကနျ တှကေ ကြောငျးသား ၆ သိနျး လုံးကို သိမျးကြုံး ပွီး စာမေးပှဲစဈတဲ့စနဈတှကေို မလုပျကွဘူး။ တဦးခွငျး ဆီကုို ဘာ တျောသလဲ ။ ဘာမှ အား ကောငျးသလဲ ။ ဘာ တှအေားနညျးနသေလဲ ဆိုတာကို ဆရာတှေ က လလေ့ာတယျ။ မှတျတမျးတှလေုပျကွလရှေိ့တယျ။
ဆကျပွီး ကွိုးစားခွငျလာအောငျ အားပေးတော့တာပဲ။ အထကျ တနျး မပွီးတဲ့ကလေးတှရှေိပါတယျ။ အနညျး အကဉျြးလောကျပဲရှိတယျ။
မွနျမာ လူငယျတှေ ဟာ သူတို့ ရဲ့ ပညာရေး စနဈ ကိုပိုကောငျးအောငျလုပျဖို့ ထကျ …
ဤကဲ့သို့ ဖွဈမညျဆိုပါက ဥပမာပွပုံ ဖနျတီးထားခွငျးဖွဈပါသညျ။